Dhageyso: Maxkamada Ciidamada oo Xukun dil ah ku fulisay 2 dhalinyaro oo ka tirsanaa Alshabaab – Walaal24 Newss
Maxakamadda Ciidanka Qalabka Sida ayaa saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay labo dhagar qabe oo k atirsanaa Alshabaab, kuwaasi oo horey u dilay nabadoon can k ahaa magaalada Muqdisho.
Waxaa lagu eedeeyey Xasan Cali Xasan iyo C/araxmaan Ciise Cali in ay horey degmada Wadajir ugu dileen Hilowle Xeefow Xuseen oo kamid ahaa nabadoona caanka ahaa ee degmadaasi ku dhaqan.
“Taariikhdu markey ahayd 3/8/2017, Maxkamada darajada koowaad ee Ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaasha kala ah Xasan Cali Xasan Keerow 25-jir ah iyo Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow 22-jir ah, kuwaasi oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay iney ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxdu qorsheyso, iyagoo si barer ah u dilay Marxuum nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen taariikhdu markey ahayd 2/11/2016, dambigaasi oo ka dhacay degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir taariikhdu markey ahayd 22/8/2017, waxayna Labada eedeysane Maxkamada ku xukuntay dil toogasho ah, waxaana maanta oo ay taariikhda tahay 7/1/2019 lagu fuliyay dilkii toogashada ahaa,” ayuu yiri xeer ilaaliye ku-xigeenka Maxkamada Ciidamada qalabka sida Dhame Muumin Xuseen C/llaahi.
Goobta xukunka oo toogashada ay ka dhacaysay waxaa ku sugnaa mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan Maxakamadda Ciidanka Qalabka Sida ee Soomaaliyeed, kuwaasi oo sheegay in maxakamaddu ay heshey cadeymo muujinaya in ay gacan ku dhiiglayaal ahaayeen sidasi darteedna loogu fuliyay dilka.
Maxkamadda ciidamada Qalabka sida ayaa dhowr jeer oo horey xukuno ugu fulisay dhagar qabayaal ka tirsanaa Alshabaab, waxaana u dambeeyey dhagar qabe dhawaan lagu toogtay Baydhabo, kadib markii lagu heley dembi ah in uu Sheekh caan ahaa dil u geystay.
Halkan hoose ka dhageyso xeer ilaaliyaha ku xigeenka Dhame Muumin:-
Baarlamaanka Puntland oo maanta dhageysanaya khudbadaha musharixiinta xilka Madaxweyne
Gudiga Xilwareejinta Gudoomiyaha Gobolka Benaadir oo la magaacabay
Dhageyso: Gudoomiye Jawaari oo faah faahin ka bixiyay sababihii loo baajiyay kulankii Baarlamaanka ee maanta loo balansanaa
Daawo: Guddoomiye Yariisoow oo ugu baaqay in ay is diiwaan geliyaan Bajaajta iyo Gadiidka kale